Ixabiso leXiaomi Mi Band 3 sele livuziwe | I-Androidsis
Ukucoca ixabiso leXiaomi Mi Band 3
Kwiintsuku nje ezimbini umsitho weXiaomi ubanjelwe China. Umsitho apho uphawu oludumileyo luza kusivelisa ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo. Enye yeemveliso esiya kuthi sikwazi ukuyazi kuyo yiXiaomi Mi Band 3. Isizukulwana sesithathu samabhanti aso aphumeleleyo siza kuthi kungekudala sifike kwimarike, ngenjongo yokuthengisa.
Kule veki, ezinye iinkcukacha malunga nayo ziye zatyhilwa. Nangona ingazukuba kude kube ngoLwesine xa zonke iinkcukacha zale Xiaomi Mi Band 3 zaziwa nzulu. Kodwa ukuze sazi ixabiso layo akusayi kufuneka silinde ixesha elide.
Uphawu lomnini Uyenzile impazamo yokunyusa ixabiso lesacholo kwikhathalogu yemveliso, nangona beye bayicima kamva. Kodwa oku kuye kwabonwa ngabasebenzisi abaninzi abathi kwangoko baqala ukwabelana ngale skrini kunye nexabiso lesongo.
Ixabiso leXiaomi Mi Band 3 yi-169 yuan. Ngokutshintshiselana kunjalo malunga ne-23 euros, ke ithembisa ukuba lixabiso elinokufikeleleka kakhulu kubasebenzisi. Nangona kunokwenzeka ukuba ixabiso layo liza kuba ngaphezulu xa lifika kwimarike yaseYurophu. Kodwa siya kulazi elo xabiso kumsitho wangoLwesine.
Le Xiaomi Mi Band 3 yenziwa kwakhona nguHuami. Uyilo lugcina umgca wesizukulwana esidlulileyo, nangona amagophe okuyilwa egxininisiwe ngakumbi kwesi sihlandlo. Kwakhona, isikrini se-OLED kulindeleke ukuba sibe sikhulu ngakumbi kunakwisizukulwana esidlulileyo. Oku kungabonisa ulwazi ngakumbi kwiscreen.
SSilindele ukuba isongo lithengiswe e-China ukusukela nge-6 kaJuni. Okwangoku umhla wokumiliselwa kweXiaomi Mi Band 3 eYurophu awaziwa. Mhlawumbi ngale Lwesine, Meyi 31, siya kushiya amathandabuzo ngayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » Ukucoca ixabiso leXiaomi Mi Band 3
UPeke Danny sitsho
Into ebizayo ngokoluvo lwam, ndiyayibona inovakalelo olukhulu kwimikrwelo yesikrini kwaye ukuba ayinayo entsha eyahlulahlula ezi-2, umpu omncinci uya kuba nawo
Phendula Peke Danny
I-Lenovo Z5 iya kuboniswa ngoJuni 5
Umdlalo wokuHlonipha: I-smartphone entsha yokudlala iya kuboniswa ngoJuni 5